I-PhoneWagon: Yonke into oyifunayo ukuze uphumeze ukuKhangelwa kweFowuni ngoVavanyo lwakho | Martech Zone
Njengoko siqhubeka nokulungelelanisa imikhankaso yamajelo amaninzi yabanye abathengi bethu, kunyanzelekile ukuba siqonde ukuba kutheni kwaye kutheni ifowuni ikhala. Unokongeza imicimbi kwi iinombolo zefowuni ezixhumeneyo ukubeka esweni ukucofa umnxeba, kodwa amaxesha ngamaxesha oko akunakwenzeka. Isisombululo kukuphumeza ukulandelela umnxeba kwaye uyihlanganise kunye nohlalutyo lwakho ukuze ujonge indlela abaphendula ngayo ngefowuni.
Ezona ndlela zichanekileyo kukuba ngamandla yenza inombolo yefowuni kwimithombo nganye ekwiikhowudi zommandla omnye. Le ndlela Yonke iminxeba engenayo inokulandelelwa ngokuchanekileyo ibuyele kumthombo wephulo okanye kwindawo oyenzele yona. Ukongeza, unakho nokuba umnxeba uvelise utyelelo kuGoogle Analytics kwindlela ebonakalayo onokuthi uyibandakanye ekulandeleleni ukulandela umkhondo.
Konke oku kufuna ukuba unenkonzo efana nayo IfowuniWagon, inkonzo eyakhelwe ngokukodwa iiarhente zokuthengisa ezilawula abathengi bazo ukulandelela umnxeba.
Iimpawu zeFowuniWagon zibandakanya:
Ukucwangciswa kweNombolo yeFowuni kwangoko -IfowuniWagon ibonelela ngedashboard enobuchule kwaye isebenziseka lula ukuba nabani na angayiqonda kwaye ayikhangele. Ngokucofa iqhosha, uyakwazi ukukhangela kwangoko nayiphi na ikhowudi yendawo kwaye ungeze inombolo yefowuni. Ngaphantsi kwemizuzwana engama-30 ungongeza inombolo yefowuni, uqwalasele inombolo, kwaye uqalise ukusebenzisa kwangoko.
Iifowuni zamanye amazwe -Ifowuniwagon ibonelela ngeenombolo zefowuni zamanye amazwe kumazwe angama-80. Ideshibhodi yethu elula ikuvumela ukuba ukhangele inombolo yefowuni ngelizwe kunye nekhowudi yendawo. Ngaphantsi kwemizuzwana engama-30 ungaqwalasela inombolo yakho yefowuni kwaye uqale ukuyisebenzisa kwimikhankaso yakho.
Iinombolo zefowuni zaseKhaya Iinombolo zefowuni zasekhaya zingqinwe ukuba ziguqula ngaphezulu kunenombolo yasimahla yamaphulo okuthengisa amashishini amancinci. Nokuba ufuna inombolo yefowuni yendawo kwidolophu ethile okanye ikhowudi yendawo nje, iFowuniWagon ikuvumela ukuba ungeze iinombolo zeefowuni zalapha kwimizuzwana engaphantsi kwe-30.
Iinombolo zasimahla Iinombolo zefowuni zasimahla zilungile kwimikhankaso yokuthengisa kuzwelonke. Banokunika inkampani yakho inkangeleko yokuba nobukho besizwe kwaye banike abathengi indlela yokukufowunela. Kwideshibhodi yethu unokongeza ngokulula iinombolo zefowuni ezingahlawulelwayo kwizinto ezahlukeneyo onokukhetha kuzo njenge-888, 866, kunye nezinye. Kuthatha ngaphantsi kwemizuzwana engama-30 ukongeza inombolo yefowuni yasimahla kwaye uyiqwalasele.
Zithathe iinombolo zakho zefowuni -Ngaba uyafuna ukusebenzisa inombolo yefowuni esele ikho okanye uhambise iinombolo onazo kunye nomnikezeli wokulandela umkhondo wefowuni kwi-PhoneWagon? Elula. Singawahambisa amanani akho kwiFowuniWagon ngenkqubo ebizwa ngokuba yi "porting". I-Phonewagon iyakhathalela konke ukuphakamisa okunzima kwaye iya kuba neenombolo zakho kwi-akhawunti yakho ye-PhoneWagon ngaphandle kwexesha.
Ukurekhoda kweefowuni -Ukulandela umkhondo kweefowuni akwanele. Ukumamela ukurekhodwa kweminxeba kuya kukunceda uqeqeshe abasebenzi bakho ekusebenziseni oko bakuthethayo ukuguqula iminxeba emininzi ibe kukuhlawula abathengi. Ukurekhodwa komnxeba kukwayindlela entle yokubuyela emva kwaye ubambe isiqwenga solwazi onokuthi ulibele ukubhala phantsi ngexesha lokufowuna. IfowuniWagon ikwenza ukuba urekhode iminxeba okanye naziphi na iinombolo zakho zefowuni kwaye ukhethe ukudlala umyalezo wokubulisa ukwazisa omnye umntu ofowunayo ukuba umnxeba uyarekhodwa.
WImiyalezo yehper -Imiyalezo yethu yokusebeza iyindlela elungileyo yokunika iarhente okanye ilungu labasebenzi eliphendula ifowuni ukuba liqonde ukuba ivela phi le fowuni. Xa bephendula umnxeba, ungadlala umyalezo kubo onjengokuthi "le fowuni ivela kwiphulo lakho lekhadi leposi kunye nesaphulelo seholide". Iiarhente ngoku zinemeko ethile kwifowuni kwaye zinokulungelelanisa indlela ezinxibelelana ngayo nomthengi ngokusekwe kolo lwazi. Kufana nekhowudi yokukopela ekunceda uphumelele.
Imiyalezo yokubulisa -IfowuniWagon ikuvumela ukuba udlale umyalezo wokubulisa kulowo ufowunayo ekuqaleni komnxeba. Unokukhetha ukurekhoda umyalezo wombuliso wesiko ngokusebenzisa izixhobo zomyalezo wokubulisa ezilula okanye ulayishe umyalezo okhoyo kwifayile ye-MP3. Imiyalezo yokubulisa inokulazisa ishishini lakho kwaye inike abathengi bakho uluvo lobuchwephesha okanye ungamvumela umfownele ukuba umnxeba uyarekhodwa.
Ukutsalwa komnxeba ngokwesiko -Ukumakisha iifowuni kukunceda ukuba uhlele ngokwazo, ulungelelanise, okanye uhlele iifowuni ngokusekwe kuyo nayiphi na indlela ojonga kuyo ukuba uyilandele. Sinee-tag esele zikho ezinje nge "lead entsha", "inombolo engeyiyo", "umthengi okhoyo", njl. Ungaqhuba ingxelo ukuze ubone ukuba zingaphi iifowuni (okanye bangaphi abafowunelwa okokuqala) ezenziwe kwithegi nganye.
Ring ngaxeshanye -Ukukhokelela kwisizukulwane konke malunga nesantya. Ukukhawuleza uphendule, okanye uphendule umnxeba, kokukhona kuya kukhokelela ekubeni uguqulele abathengi abahlawulayo. Sinikezela ngokukwazi ukukhala iifowuni ezininzi ngaxeshanye. Umntu wokuqala ukuphendula uzakuqhagamshela kulowo ufowunayo. Oku kunceda ukunciphisa amaxesha okulinda kwiifowuni ezingenayo, ukuhambisa amava angcono kubathengi, kunye nokuvelisa ukuthengisa ngakumbi.
IiAkhawunti zomsebenzisi ezingenamkhawulo -IfowuniWagon ikuvumela ukongeza abasebenzisi abangenamkhawulo kwiakhawunti yakho. Sinikezela ngeendima ezahlukeneyo zomsebenzisi ngeemvume ezahlukeneyo ukuze ubonelele ngokungena kuwo wonke umntu kwaye baya kuba nakho ukufikelela kuphela oko bafuna ukufikelela kuko.
Iiakhawunti zaBaxumi IfowuniWagon yenzelwe ukwenza iinkampani ezininzi okanye iindawo kwiakhawunti nganye. Oku kwenza ukuba ugcine idatha yakho ibotshelelwe kwinkampani efanelekileyo okanye kwindawo njengoko usenza kwiintengiso zikaGoogle. Iiarhente zentengiso zinokongeza bonke abathengi bazo kwaye zibonelele ngokungena kumthengi ngamnye oya kuthi akwazi ukufikelela kulwazi lwabo.
Isishwankathelo se-imeyile -Ngaba uyafuna ukufumana imeyile kunye nayo yonke idatha malunga neefowuni zakho ngaphandle kokungena ngemvume kwideshibhodi yakho? IfowuniWagon ibonelela ngesishwankathelo se-imeyile yonke imihla, ngeveki, okanye ngenyanga. Unokwenza ii-imeyile ngokwezifiso kwaye nokuba zivela kwi-domain yakho. Oku kuvumela iiarhente zentengiso ukuba zigcine uphawu lwazo lungaguquguquki xa kunxibelelana nabathengi.
Izilumkiso ngeFowuni ye-imeyile Izilumkiso zokufowuna nge-imeyile okanye izaziso ze-imeyile ezikuvumela ukuba uthumele ngokuzenzekelayo i-imeyile nanini na kukho umnxeba omtsha kuwo nawuphi na umkhankaso okanye ungawuseta ukuba uthumele kuphela amaphulo athile. Uyakwazi ukwenza ngokwezifiso ezi meyile ukuba uzithumele zivela kwidomeyini yakho (okt “izaziso@yourdomain.com”) ukugcina uphawu olufanayo xa unxibelelana nabaxumi bakho.
INgxelo ePhambili -Fikelela ngokulula kwiingxelo ezomeleleyo ngokusekwe kwidatha yakho yokufowuna. Jonga idatha enolwazi njengawaphi na amaphulo aqhuba iifowuni eziguqula zibe kukuhlawula abathengi okanye ukuba zingaphi iifowuni ezivela kubabizi bexesha lokuqala kwaye zingaphezulu kwemizuzwana engama-90. Sebenzisa le datha ukwenza izigqibo ezizizo ngenkcitho yentengiso kunye / okanye uqeqeshe abathengi bakho ngendlela abanokwenza ngayo umsebenzi ongcono wokuguqula iifowuni zibe ngabathengi abahlawulayo.
Iifowuni ezinamandla Iinombolo zefowuni ezinamandla zenza ukuba ukwazi ukulandela ukuguqulwa kweminxeba ngendlela efanayo olandelela ukuguqulwa kwefom yewebhu. Sikunika umgca omnye wekhowudi ukongeza kwiwebhusayithi okanye iphepha lokufika kwaye senza okunye. Iifowuni zilandelwa kwiseshoni yeendwendwe kwaye ufumana idatha apho luvela khona undwendwe, intengiso abacofe kuyo, iphepha lokufika abaye kulo, nokunye okuninzi. Yenza inombolo eguqukayo kwideshibhodi yakho kwimizuzwana engaphantsi kwama-30 kwaye uqalise ukulandela umkhondo wokuguqula umnxeba ukuze ufumane umfanekiso opheleleyo wento eyenzekayo ngamaphulo akho okuthengisa.
Undwendwelo kunye nokuKhangela kwinqanaba lokuPhambili -Sibonelela ngokulandela umkhondo wabatyeleli kunye nenqanaba lamagama aphambili sisebenzisa amanani ethu anamandla. Kuba undwendwe ngalunye luboniswa inani elahlukileyo, siyazi xa olu ndwendwe lubiza inombolo eyahlukileyo ebonisiweyo kubo kwaye ke sinokuthi umnxeba wabo uya kungena kwiseshoni yabo. Oku kusinika idatha eyimbumbulu ngokumangalisayo njengegama eliphambili abalifunayo kunye neqela lentengiso abavela kulo.
Umdibaniso kaGoogle woHlaziyo -Ifowuniwagon ibonelela ngokudityaniswa ngokuthe ngqo kwinkampani nganye kwiakhawunti yakho yeFowuniWagon kunye noHlaziyo lukaGoogle. Ungatyhala yonke iminxeba yakho kwiGoogle Analytics njengeziganeko ukuze ubone ukuba kwenzeka ntoni kwaye zingaphi iinguqu oziqhubayo, kwanakule micimbi ye-intanethi.
Umdibaniso weAdwords kaGoogle -IfowuniWagon idityaniswa ngokuthe ngqo neeNtengiso zikaGoogle (ezazisaziwa njengeGoogle Adwords). Ngokucofa kanye, ungadibanisa inkampani nganye kwiakhawunti yakho yeFowuniWagon kunye neakhawunti yakho yeNtengiso zikaGoogle zeMCC, ukhethe iakhawunti encinci, kwaye kwangoko senza isenzo esiguqukayo esibizwa ngokuba ziiFowuni eziza kutyhala uguqulo kwiiNtengiso zikaGoogle kuzo zonke iifowuni ezisuka kwimo yakho enamandla inombolo kuloo nkampani.
Umyalezo obhaliweyo ozenzekelayo -Yenza umyalezo obhaliweyo uphendule iifowuni eziphosiweyo kunye neminye iminyhadala. Oku kunceda ukuba ubandakanye abathengi kwindlela yabo yokunxibelelana, ukuthumela imiyalezo, kwaye ubathintele ekubizeni umntu okhuphisana naye ukuba awuyiphenduli ifowuni yakho.
IfowuniWagon yafunyanwa ngu IfowuniRail, enye inkokeli ekulandeleleni ukulandelwa kweefowuni.
Qalisa ukulingwa kwamahala ngeFowuniWagon
Ukubhengezwa: Sithanda i-PhoneWagon kakhulu kangangokuba ngoku singummeli wabo!
tags: iqela lentengisoukulandelela umnxebafowuna ukulandelela uhlalutyoiintengiso zikaGooglegoogle adwordsi-google analyticshubspotumkhondo wefowuniifowuni